U-50 ka-Kapp no-Lee kulinganisa i-T20 series
Marizanne Kapp of South Africa celebrates her half century
U-50 wokuqala ka-Marizanne Kapp kwindima yakhe entsha yokushaya phezulu kusize ama-Proteas esifazane ahlule i-Pakistan ngezinti eziyisishagalombili kusele ibhola elilodwa kumdlalo wesibili we-T20 International e-City Oval e-Pietermaritzburg ngoMgqibelo.
i-all-rounder ishaye u-56 emabholeni awu-51 o-four abane ukusiza iqembu lasekhaya lijahe u-129 ukuze linqobe futhi lilinganise i-series enemidlalo emihlanu kube u-1-1 ngaphambi komdlalo wesithathu enkundleni efanayo ngeSonto.
Kube nokusekelwa okufanayo kwa-Kapp okuphume ku-Lizelle Lee, oshaye u-56 emabholeni awu-52 okubalwa khona o-four abahlanu no-six owodwa. Kube impendulo enhle kubadlali ba-Hilton Moreeng emuva kokuthi bahlulwe kalula kumdlalo wokuqala.
Oshwiba ngokushesha u-Kapp ebephakathinendawo kumdlalo, naye wakhipha inti eyodwa ngama-runs awu-28 (1/28) kuma-overs akhe amane emuva kokuthi izivakashi zinqobe i-toss futhi zikhethe ukushaya kuqala.
u-Javeria Rauf (16) no-Umaima Sohail (23) babaqalise kahle, ngaphambi kokuthi u-Sune Luus (2/29) ahlasele kabili ukubashiya ku-61/3 nge-over yesi-12. Ukapteni othembekile, u-Bismah Maroof, uphinde wadlala kahle eqenjini lakhe njengoba eshaye u-63 engaphumanga emabholeni awu-47 (9 fours) ukubeka iqembu lakhe ku-128/5.
Ngaphandle kwa-Kapp no-Luus ngebhola, u-Tumi Sekhukhune (1/12) no-Shabnim Ismail (0/17) abashwibe kahle ngezinti eziyisikhombisa phakathi kwabo. Ama-South Africans alahlekelwe u-Taznim Brits enama-runs awu-17 nge-over yesihlanu, kodwa kwaqhamuka inhlanganiso yama-runs awu-96 ngenti yesibili phakathi kwa-Kapp no-Lee, othole u-50 wakhe yesishagalombili kuma-T20 international.
Umdlalo wesibili uzodlalelwa e-Pietermaritzburg Oval ngo-19 May 2019 (kusasa) kusukela ngo-13h00. Yonke i-T20 series phakathi kwe-South Africa ne-Pakistan izovezwa ku-YouTube we-Cricket South Africa.
Ukuhamba komdlalo kuzotholaka ezinkundleni zokuxhumana ze-Cricket South Africa ku-Facebook (www.facebook.com/cricketsouthafrica) no-Twitter (www.twitter.com/officialcsa).
All-round Nida Dar puts Pakistan 1-0 in T20 series Ama-Proteas esifazane azimisele ngokuthuthuka kuyela kumdlalo wokuqala we-T20 series enemidlalo emihlanu South Africa ne-Pakistan bayalingana kwi-ODI yokugcina, balingana ngo-1-1 kwi-series i-South Africa ilindele ukwenza konke okusemandleni kwi-ODI ezocacisa i-series u-Moreeng usekela ukuqina komqondo kwi-South Africa kanye nekhono lokubuya kahle kuyela kwi-WODI yesibili Spin sends Proteas Women tumbling in opening ODI v Pakistan u-Kapp uyakujabulela ukufika ukuqopha umlando kumsebenzi wakhe i-South Africa ihlelele i-ODI series yabesifazane Abancane babheke ukuthatha amathuba kuhambo lama-Proteas esifazane Ama-Proteas esifazane agculisekile ngamalungiselelo ngaphambi kohambo lasekhaya ne-Pakistan Ugculisekile u-Nackerdien ngokunwebeka kwabanamathalente